Fidangan’ny vidim-bary : Tsy tokony hihoatra ny 1.600 Ar ny kilaon’ny « stock » | NewsMada
Fidangan’ny vidim-bary : Tsy tokony hihoatra ny 1.600 Ar ny kilaon’ny « stock »
Handray fepetra ny fitondrana manoloana ny fidangan’ny vidim-bary. Nifanarahan’ny fanjakana sy ny mpanafatra vary, ary ny prefkatioran’i Toamasina ny hamerana ny vidim-bary nohafarana avy any ivelany.
Nidina taty Toamasina, ny 5-6 desambra teo, ny minisitry ny Varotra sy ny fanjifana, Chabani Nourdine, nijery ny zava-misy manoloana ny fidangan’ny vidim-bary. “Tsy rariny intsony izao”, hoy izy. Ny 28 novambra, efa nifanaraka an-tsoratra ny prefektioran’i Toamasina, ny sampandraharahan’ny varotra ary ny mpandraharaha mpanafatra vary fa hamidy 72.000 Ar (1.440 Ar/kg) ny vary avy any Birmanie iray kitapo, 73.000 Ar (1.460 Ar/kg) ny avy any Pakistan. Tsy voaresaka kosa ny vary avy any Sina, saingy amidy 1.500-1.600 Ar ny kilao eny amin’ny antsinjarany, izany hoe 460 Ar ny kapoaka. Nilaza ny minisitry ny Varotra, fa manana andraikitra hanara-maso ny fahatongavan’ny vary avy any ivelany ny vaomiera iombonana “Task force”, ahitana ny prefektiora, ny faritra, ny sampandraharahan’ny varotra, ny mpitandro filaminana, ny vondron’ny mpandraharaha mpanafatra entana Toamasina(GIPT).
Tsy vao izao
Afaka arahi-maso koa ny vidim-bary eny amin’ny mpamongady sy ny mpaninjara. Nomarihiny fa ampy tsara ny famatsiam-bary, tsy tokony hisy ny vary lany daty, fa mahatonga ireny ny fanafenam-bary.
Tsy vao izao no nisin’ny fepetra nilaza fa harahi-maso ny vidim-bary, toy ny taorian’ny rivodoza Enawo. Nampivory ny tompon’andraikitra toy izao ny praiminisitra, nanomezana toky fa milamina ny raharaha. Nambara fa tsy hihoatra ny 1.500 Ar ny kilaon’ny vary nohafarana ho an’ny mpaninjara, tsy maintsy apetraka ny vidin’entana. Tsy nisy nihaino izany sady tsy nisy tanteraka ka ho hita eo indray ity “Task force” ity.